XUQUUQAHA SIYAASADA | ALC Ozaukee
Kheyraadka Wax Akhrinta
Maktabadaha Degmada Ozaukee
Maktabadda Dadweynaha ee Cedarburg
Maktabadda Oscar Grady (Saukville)
Maktabadda WJ Niederkorn (Port Washington)
Maktabada Dadweynaha ee Xorriyadda Xoriyadda ee USS (Grafton)
Maktabadda Frank L. Weyenberg ee Mequon-Thiensville
Learners anguage Ingiriisi L
Xiriiriyaha Isuduwaha Barnaamijka si aad u hesho macluumaadka. Tani waa goob wanaagsan oo loogu talagalay casharada naxwaha dheeriga ah, maahmaahyada, boggag gaagaaban, baloogyada loogu talagalay laylisyada dhagaysiga iyo kaararka tooska ah.
Goobtani waa goob dawladeed loomana qorna diiwaangelinta, laakiin waa inaad iska diiwaan gelisaa si aad u adeegsato. Kheyraad badan oo Ingiriisiga Mareykanka ah ayaa la bixiyaa, oo ay ku jiraan fiidiyowyo leh maqal. Waxaa ku yaal ilaha dhalashada ee bogga hoose.
Fiiri Kheyraadka Macallinka, Manhajka iyo Qalabka, iyo Akhriska Akhris-qoraalka ESL! Boggan waxaa laga helaa buugaag maqal oo heer sare ah heerar kala duwan oo waxbarasho.
Meel bilaash ah oo ay ku jiraan waraaqo-shaqeed wanaagsan oo loogu talagalay bartayaasha waaweyn ee ESL. Sidoo kale waxay leedahay xujooyin wareega iyo ciyaaraha.
Maqaallada wararka oo ay soosaaraan heerar iyo fiidiyowyo maahmaahyo iyo naxwaha. Qalabka dastuurka.
Kheyraad wanaagsan oo loogu dhawaaqo xarafka iyo leylisyada iyo waraaqaha naxwaha.
Il wanaagsan oo loogu talagalay ereyada
Waxay ku siisaa flashcards bilaashka ah oo daabacan wax walba oo ka yimaada xarfaha illaa Maalinta Jacaylka.
Bog bilaash ah oo bixiya laylisyo is-weydaaran xagga akhriska, naxwaha, kalmadaha, iyo dhagaysiga bilowga heerar sare.
Bog bilaash ah oo bixiya waraaqo waraaqo iyo macluumaad loogu talagalay barayaasha, iyo sidoo kale tijaabooyin iyo layliyo isdhaxgal oo ardayda lagu bilaabayo ilaa heerarka sare. Sidoo kale wuxuu leeyahay aqrin tixraac Ingiriis ah iyo baraha internetka ee ardayda iyo macallimiinta.
Bog wanaagsan oo isdhaxgalka ah oo ay u isticmaali karaan ardayda kaligood ama ay ku caawin karaan macallimiinta. Waxay leedahay qalab badan oo waxbarid ah oo loo qaybiyay aasaas, dhexdhexaad, iyo heerar sare.
Qorshayaasha casharka waxaa lasiiyaa diyaarinta imtixaanka dhalashada.
Dhacdooyinka hadda socda waxay ku qoran yihiin Ingiriis fudud.
Adeegso bogga Bartayaasha / Maamulka.
Maqaallada ay soo bandhigeen heerar leh eraybixin ayaa hoosta laga xariiqay. Diiwaanka loo baahan yahay - ka hubso Isku-duwaha waxbarashadda username iyo password.
Goob wanaagsan oo loogu talagalay hagida GED iyo ABE. Goobtu waxay u baahnayd isdiiwaangelin.